China Spray Sterilization Tunnel Machine mpanamboatra sy mpamatsy |Willman Machinery
Vokatra: milina famafazana famafazana tonelina
PLC Automatic Temperature Control
Fahaizana: 4800-24000 kapoaka isan'ora
Delivery Time: Tokony ho 25 andro
Autoclave automatique multi-purpose dia manana tombony amin'ny fahombiazana avo, fizarana hafanana fanamiana, fihenan'ny fotoana fiakaran'ny mari-pana, teknolojia ara-tsakafo mandroso, fihenan'ny fatiantoka otrikaina ary tsiro tsara.
Miaraka amin'ny fampiasana fiara fitaterana mandeha ho azy, dia miasa mifanaraka amin'ny tetika optimization izy io mba hampihenana ny fotoana hidirana ao amin'ny autoclave ary handefa haingana ny cage feno ao anaty autoclave.
Aorian'ny ster-ilization, ny rafitra dia hiantso ho azy, ary ny fiara famindrana mandeha ho azy dia handefa ny vokatra mivantana any amin'ny lalan'ny filaharana mba hamitana ny fandefasana tranom-borona mandeha ho azy.
Famaritana ara-teknika milina
1. Stainless vy fitaovana, compact rafitra ankapobeny
2. High quality plastika harato rojo lovia,
3. Ny mari-pana ambony resista harafesiny fanoherana
4.Ny mari-pana sensor Pt100 dia manana fandrefesana avo, izay mety hahatratra ± 0.5C.
5. Ny sterilization ternperature dia fehezin'ny PLC touchscreen, STIN
6. Ny fotoana fanodinana manontolo dia fehezin'ny fiovam-po matetika, izay azo amboarina araka ny fizotran'ny famokarana.
Habe: L=10M W=1M
fanjifana rano: Fampiasana fanodinana
Fitaovana: SUS304 Stainless vy
etona ny rano.Miaraka amin'ny temp.rafitra fanaraha-maso.
Famaritana ny asa: misy dingana telo amin'ny mari-pana.,
Dingana préheating: 4 metatra
Dingana fanafanana (stage sterilization): 4 metatra
Dingana fampangatsiahana: 4 metatra
teo aloha: Fividianana Super ho an'ny Shina 3 harona fanafanana etona Retort Sterilizer Dn1100X2000 Autoclave
Manaraka: Orinasa mpamokatra ho an'ny China Industrial Bottled Beverage Sterilizers/Rano Tifitra karazana Tonelina labiera Pasteurization Machine
Automatic Foana Metal Afaka Depalletizing Machine...
Automatic Empty Can Depalletizer ho an'ny pr...
Masinina fametahana marika automatique